Home » အသားပေး » "Spider-Man: Homecoming" Big အချိန်အသံအသင်းသားများ
"Spider-Man: Homecoming" Big အချိန်အသံအသင်းသားများ
5.1 surround sound အတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်သည့်အခါအသံကဒီဇိုင်းစစ်မှန်တဲ့အနုပညာပုံစံကျိန်းသေသိသာသည်။ ဖန်တီးခြေရာခံ, ရောစပ်နှင့်အသံကဒီဇိုင်နာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှောင်မိုက်ရုပ်ရှင်အိမ်တော်၌၎င်းတို့၏ပေါက်ပေါက်နှင့်သကြားလုံးစားခြင်းနေစဉ်ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကိုပေးသောထုံးစံအော်ဂဲနစ်အသံတွေနှင့်အတူခမ်းနား Blend ပုံရိပ်ယောင်များပူးပေါင်းအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်သည့်အခါ mastering အမှန်တကယ်ဖှယျဖြစ်ပါသည်၏အနုပညာ။ အဆိုပါရှေးရှေးမှာ Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ အတိတ်5နှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံး Blockbuster ရုပ်ရှင်တွေထဲကတစ်ခုဖြည့်စွတ်ရန်ဝါရင့်သံကိုအသင်းဆောက်လုပ်ထား "Spider-Man: Homecoming" က၏ပထမခြောက်လ-ရက်အတွင်းဖြန့်ချိမြောက်အမေရိကအတွက် $ 154.1m (တစ်ဦးတည်း) နှင့် $ 220 သန်းကျော်ယနေ့အထိစုစုပေါင်းရဲ့!
အဆိုပါ Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှု Services မှအသံဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကဤပရိယာယျစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည်: အသံအယ်ဒီတာများကြီးကြပ် အဲရစ် Norris က (အဆိုပါ Amazing Spider-Man 2, သံမဏိလူသား) နှင့် စတီဗင် Ticknor (Spider-Man, အဆိုပါလင်ကွန်းရှေ့နေ), အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်-winning Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှော ကီဗင် O'Connell (Hacksaw Ridge, Transformers), အသံဒီဇိုင်နာ / Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှော တိုနီ Lamberti (Ghostbusters, Inglourious Basterds) နှင့် Foley အဆိုတော် ဂယ်ရီ Hecker (တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, ပင့်ကူလူသား, Spider-Man 2, Spider-Man 3) ။ အဆိုပါ Dolby Atmos ရောနှော၏တည်နေရာပေါ်သျောခဲ့သည် Sony က ရုပ်ပုံများ '' ဝီလျံ Holden အဆင့် (ကြီးစွာသောဝီလျံ Holden ပြီးနောက်အမည်ရှိ ဟောလိဝုဒ်'s ရွှေ Boy နှင့်ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများအစောပိုင်းသရုပ်ဆောင်ကျောက်ဆူး) ။
ဖွငျ့ဤအထင်ကရစူပါဟီးရိုးအရေးယူရုပ်ရှင်၏ reboot ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများနှင့်အံ့ဩခြင်းစတူဒီယို ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ဌန်, ရုပ်ရှင်မှော် gadgetry သည်နှင့်ဆက်ဆက်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာအသံဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် Creative ခဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးနဲ့စာရေးတံ။ "ဒါဟာတစ်က high-ကထုတ်တဲ့အမှုထမ်းခဲ့သည်" Ticknor ကပြောပါတယ်။ "အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း, ကျနော်တို့ကောင်းစွာ blended လူတိုင်းလှူဒါန်းခဲ့နှင့်အတွေးအခေါ်များချောမွေ့စွာစီး။ "
ဥပမာအားဖြင့်, အသစ်ဖန်တီးတိုနီ Stark ဒီဇိုင်း Web-slinger ရဲ့ဝတ်စုံ retro-တပ်ဆင်တဲ့လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်အတူခဲ့ နှင့် Foley ၏အနုပညာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ "ဒါဟာအဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်အသံကိုဖန်တီးရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စိန်ခေါ်မှုခဲ့" Norris ကပြန်ပြောပြသည်. "စတိဗ်တစ်ဦးက high-မျပီပီထုတ်လုပ်မယ့်ကစားစရာ noisemaker သုံးပြီး၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတက် လာ. ။ ကျနော်တို့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေးရကြောင်းနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများတစ်ဦး palette ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ " ၏သင်တန်း, ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သံကိုအထူးပြုခဲ့သောအဟောင်းများကို Spider-Man ဝတ်စုံကိုရှိသည်။ "Jon Watts, ဝဘ်အနည်းငယ်လျော့နည်းခေတ်သစ်ပူနှင့်အေးမြဖြစ်သည့်သစ်ကို Stark ဝတ်စုံကိုမှရိုက်သောဝဘ်ထက်အသံမှအဟောင်းကိုဝတ်စုံကိုကနေလာမယ့်လိုချင်" Ticknor မှတ်ချက်ပြု. "ကျနော်တို့ကသံလိုက်တိပ်၏ 5,000 ပေလိပ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအမိန့်တို့ကိုပျက်ပြယ်ကုန်အံ့။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်း-ကျောင်းကိုက်ဘ်ဖြစ်လာခဲ့သည်တစ် whooshing သံကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ "
အဖွဲ့တစ်စိန်ခေါ်မှုချမှတ်ထားကြောင်းနောက်ထပ်အက္ခရာ (သောသူသင်တန်း၏ "ချဲ့မနေတော့ ယူ. ") အစဉ်အဆက်သတ္တုအမွေးအတောင်နဲ့အတောင်များနှင့်ဂျက်တာဘိုင်အင်ဂျင်ကနေပစ္စည်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့တပ်ဆင်ထားသောစူပါဗီလိန်လင်းတနှင့်သူ၏ပျံဝတ်စုံကိုပဲ! "ကျနော်တို့ကအတူတကွအသံသီးနှံများကိုပုံနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အရေးယူထင်ဟပ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအသိကိုဖန်တီးရန်သူတို့ကိုပုံဖော်ဖို့ samplers အသုံးပြုသော" Lamberti ကရှင်းပြသည်. "ဒါဟာပျော်စရာတွေအများကြီးခဲ့သည်!"
ထုတ်စစ်ဆေး Go Spider-Man: Homecoming သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလိမ္မာသည် ဖြစ်. သံကိုဒီဇိုင်နာများတွေ့ကြုံခံစားဖို့မပါလျှင်!
Sony Pictures Entertainment က (SPE) ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ် Sony က တိုကျိုအခြေပြု၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည့်ဖျော်ဖြေမှု Inc ကို, Sony က ကော်ပိုရေးရှင်း။ SPE ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှု, ဝယ်ယူနှင့်ဖြန့်ဖြူးပတ်ဝိုင်း; ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု, ဝယ်ယူနှင့်ဖြန့်ဖြူး; ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များ, ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး; စတူဒီယိုအဆောက်အဦ၏စစ်ဆင်ရေး; အသစ်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ SPE ရဲ့ Motion Picture Group မှရုပ်ရှင်ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများ, မျက်နှာပြင်ကျောက်မျက်ရတနာ, TriStar ရုပ်ပုံများတံဆိပ်များလည်းပါဝင်သည်, Sony က ရုပ်ပုံများ Animation ရဲ့နှင့် Sony က ရုပ်ပုံများဂန္တဝင်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, ခရီးစဉ် www.sonypictures.com.
post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ	2017-07-20
ယခင်: EditShare ၎င်း၏ Flow လွတ်လပ်ရေးနေ့, IBC2017 မှာ QUALES QC ကို Magic နှင့် New EFS နဲကားရပ်ရန်သိုလှောင်ဖော်ပြပေး
နောက်တစ်ခု: ဆမ်ရဲ့ LiveTouch နှင့် Kahuna တစ်ဗိုလ်မှူးဂီတပွဲတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး UHD ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အသံလွှင့်အပြင်ဘက်တွင် CTV အားဖြင့်တပ်ဖြန့်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "" Spider-Man: Homecoming "" Big အချိန်အသံအသင်းသားများ။ http://www.broadcastbeat.com/spider-man-homecoming-weaves-big-time-sound/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။